Horjooge ka tirsan Al-shaab oo lagu dilay Gobolka bakool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Horjooge ka tirsan Al-shaab oo lagu dilay Gobolka bakool
Ciidamada xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa Amisoom ayaa maanta howlagal ka fuliyay deegan u dhaw degmada xudur oo qiyaastii u jirta 27km ee gobolka bakool.
Howlgalka ayay ciidamada ku dileen horjeege ka tirsan maleeshiyada Al-shaab halka mid kalana gacanta lagu dhigay Horjoogaha maantay lagu dilay howlagalka ay fuliyeen ciidamada dowladda ayaa lagu magacabaa Xasan Isaaq Nuur”madaxey’oo Al- shabaab u qabaabilsanaa waxa ay ugu yeereen sakawaat.
Aadan Maxamed Axmed oo ah sargaal ka tirsan ciidanka xooga dalka oo u waramay warfidiyeenada ayaa sheegay in ay guul weyn ka gaareen howlgalkii ay maanta qaadeen ciidamada xooga dalka.
“waxaan saakay howlgal ka sameynay deeganada hoostaga magaalada xudur ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al shabaab,waxaan dilnay mid ka mid ah xorjoogaayshooda mid kalana gacanta ayaan ku heynaa dhawaan ayaan warbaahinta u soo bandhigi donaaa sidaas waxaa yiri Aadan Maxameed Axmed oo ah sargaal ka tirsan ciimada xooga.
Sargaalka oo hadalkiisa siiwata ayaa yiri howlgalkeena maahan mid ku eg maalin ama maalmo inta ay shabaab joogaan taako ka mida ciida soomaaliya waan wadaynaa howlgalkeena waana ka sifeynaynaa in shaa alaah.
Dhawaan ayay aheed markii Maxaxweynaha maamulka koofur galbeel uu ku dhawaaqay in dhawaan dhulka koofur galbeed laga sifeen doono kooxda Al-shaab inta aan la gaarin doorashada.
Somaliland Oo Gobolka Sool Gaadhsiiyay 40Kun Oo Dolar Oo Ka Qayb Ka Ahayd Kaalmadii Halka Milyam Ee Somaliya (VIDEO)